Mogadishu Journal » Shirka Golaha Amniga Qaranka oo galay maalinkii labaad
Shirka Golaha Amniga Qaranka oo galay maalinkii labaad
Mjournal :-Waxaa maalinkii labaad galay shirka Golaha amniga Qaranka oo uu shir guddoominayo Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/laahi Maxamed (Farmaajo), ayna ka qeyb galayaan Madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada dalka ka jira.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa xalay kulamo gaar gaar ah waxa uu magaalada Baydhabo kula qaadanayay masuuliyiinta dowlad goboleedyada gaar ahaan madaxda maamulka Galmudug oo hada khilaaf uu ka dhexeeyo.
Kulan dhexmaray Madaxweyne Farmaajo iyo Madaxa xukuumadda Galmudug Maxamed Shaakir ayaa wararka ku dhaw dhaw waxa ay sheegayaan in aad looga hadlay khilaafka u dhaxeeya hoggaanka Galmudug, oo hada kala jooga Cadaado iyo Dhuusa-mareeb.
Madaxweynaha Soomaaliya iyo Madaxda xukuumadda Galmudug Sheekh Maxamed Shaakiri Cali Xasan ayaa waxaa la sheegay in ay si aad uga wada hadleen sida ugu macquulsan ee xal loogu gaari karo khilaafka hareeyay Madaxda Galmudug iyo doorka dowladda dhexe.
Shirkan ayaa waxaa lagu adaa gelinka dambe ee maanta in lagusoo gaba gabeeyo magaalada Baydhabo ee caasimadda KMG ah maamulka Koonfur Galbeed, waxaana laga soo saari doonaa war-murtiyeed ay isku raacsan yihiin madaxda ka qeyb gashay.
Heshiiska maanta lagu wado inuu ka soo baxo war-murtiyeedka shirka magaalada Baydhabo ayaa waxaa la sheegayaa in ay aad u taaban doonaan siyaasadda kheyraad wadaagga, arrimaha ammaanka iyo la dagaalanka ururka Al-shabaab.
Dowladda Soomaaliya oo 1 milyan oo dollar ugu deeqday Somaliland